ऐतिहासिक होटल युरोप अनि कसरी त्यहाँ प्राप्त गर्न | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > ऐतिहासिक होटल युरोप अनि कसरी त्यहाँ प्राप्त गर्न
ऐतिहासिक होटल युरोप अनि कसरी त्यहाँ प्राप्त गर्न
ट्रेन द्वारा व्यापार यात्रा, ट्रेन यात्रा, ट्रेन यात्रा अस्ट्रिया, ट्रेन यात्रा ब्रिटेन, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप
पढ्ने समय:4मिनेट(Last Updated On: 29/12/2019)
युरोप मा ऐतिहासिक होटल हो एक दुर्लभ दृष्टि, विशेष गरी एक धनी इतिहास संग ठूलो शहर मा. पेरिस, लन्डन, रोम, म्यूनिख, भियना - यी शहर को सबै प्रस्ताव राम्रो ठाउँमा छ. पर्यटक केही लालसा परम्परागत लक्जरी युरोप मा रहन ठाउँ फेला कुनै कठिनाइ हुनेछ. यो बारेमा सबै भन्दा राम्रो भाग तपाईं रेल यी शहर को सबै यात्रा गर्न सक्ने छ, बजेट मा. यहाँ कसरी रेल द्वारा त्यहाँ प्राप्त गर्न युरोप र शीर्ष पाँच ऐतिहासिक होटल हो:
1. हामी संग ऐतिहासिक होटल को हाम्रो सूची सुरु – रिट्ज, पेरिस
युरोप मा शीर्ष ऐतिहासिक होटल को कुनै सूची बिना पेरिस पूरा हुनेछ. यसको आतिथ्य उद्योग को एक मोती बाहिर खडा: रिट्ज. हाेटल एक धनी इतिहास दावा र एक शानदार भित्री संग जान. यसलाई मा स्थापित भएको थियो 1898, र त्यसपछि पनि को शिखर थियो सान्त्वना.
रिट्ज स्वाभाविक युरोपेली उच्च समाज को सदस्य को लागि एक लोकप्रिय विकल्प थियो. यसको प्रसिद्ध अतिथि केही ड्यूक र रानी विंडसर को थिए, कोको Chanel, र अर्नेस्ट हेमिंग्वे, अरु मध्ये. तपाईं आफ्नो अन्वेषण गर्न चाहनुहुन्छ भने आकर्षक इतिहास, तपाईं जस्ता अन्य प्रमुख युरोपेली शहर देखि पेरिस एक रेल लाग्न सक्छ लन्डन, रोम, एम्स्टर्डम, वा ब्रसेल्स.
पेरिस गाडिहरु गर्न मार्सेइल
2. Belmond Cadogan होटल, लन्डन
लण्डन Belmond Cadogan होटल एक बुटीक होटल मानिन्छ, तर यो लामो र रोमाञ्चक छ इतिहास. केही यो समयमा पनि नाटकीय थियो भन्नुहुन्छ, रूपमा ओस्कार वाइल्ड त्यहाँ आफ्नो गिरफ्तारी प्रतीक्षा थियो 1895. को Cadogan छ 64 कोठा र एक अद्भुत एडवर्डियन वातावरण. यो एक ऐतिहासिक टाउन छ, र यो युग को अद्वितीय चरित्र धेरै राखिएको छ. तपाईं हाम्रो पहिलो सिफारिस लिन भने, तपाईं सजिलै रेल द्वारा लन्डन पेरिस बाट यात्रा सक्छ.
लिले लन्डन गाडिहरु गर्न
3. Albergo डेल एकमात्र अल Pantheon, रोम
जब यो युरोप मा ऐतिहासिक होटल आउँछ, रोम मा Albergo डेल एकमात्र अल Pantheon केक लिन्छ. यो संसारमा सबैभन्दा पुरानो होटल को एक हो, मा स्थापित 1467! को बेवास्ता कि कोठा Pantheon सबै भन्दा राम्रो हो, सजावट रूपमा पुनर्जागरण-शैली बेड र 17 शताब्दीका फ्रेस्कस संग पूरा. यो भन्दा कुनै पनि राम्रो वा बढी ऐतिहासिक प्राप्त गर्दैन. अर्को बोनस भनेर रोम यात्रा एकदम रेल द्वारा सजिलो छ, विशेष गरी अन्य प्रमुख देखि सुरु इटालियन शहर.
रोम गाडिहरु गर्न salerno
4. होटल Torbrau, म्यूनिख
को Torbrau आराम र गर्न सल्जबर्ग देखि वाक्क यात्री को लागि एक स्थानको रूपमा सुरु राम्रो बियर. यसलाई लागि सञ्चालन भएको 500 वर्ष, र यो '90 को दशक मा यसको आधुनिक नवीकरण प्राप्त. को Torbrau एक मनपर्ने छ व्यावसायिक यात्री र पर्यटकहरु गर्ने थप चाहनुहुन्छ आकर्षक ऐतिहासिक होटल अनुभव. तपाईं हुनुहुन्छ भने रेल द्वारा म्यूनिख भ्रमण बर्लिन देखि, भियना वा अन्य युरोपेली शहर, तपाईं Torbrau मा रहन योजना सक्छ.
म्यूनिख गाडिहरु गर्न कोलोन
5. महान् होटल Wien, भियना
महान् होटल Wien निर्माण 1870, र केवल एक निजी निवास रूपमा छोटो रकम खर्च. यो को ओपेरा क्षेत्र आसपास "रिङ होटल" को पुरानो छ Ringstrasse भियना मा. जहाँसम्म इतिहास जान्छ रूपमा, होटल उत्तेजना र भावनात्मक चोटबाट दुवै को यसको शेयर देखेको छ. यो tragically समाप्त जो Mayerling सम्बन्ध को पृष्ठभूमि थियो, को अष्ट्रीया क्राउन प्रिन्स रुडोल्फ र आफ्नो प्रेमी को मृत्यु संग, Baroness Marie Vetsera. कथा तपाईं चासो छ भने, तपाईंले भ्रमण गर्न युरोप मा ऐतिहासिक होटल को सूचीमा महान् थप्न सक्छ. टाउको रेल द्वारा भियना म्यूनिख देखि, सल्जबर्ग मा एक स्टप संग.
भियना गाडिहरु गर्न फ्रैंकफर्ट
ट्रेन सारांश द्वारा युरोप मा ऐतिहासिक होटल गएर!
तपाईं युरोप मा सबै भन्दा रोचक ऐतिहासिक होटल केही भ्रमण गर्न खोजिरहनुभएको? प्रमुख युरोपेली शहर मार्फत तपाईंको यात्रा योजना र रेल टिकट बुक तपाईं प्राप्त गर्न!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई एक क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhistoric-hotels-europe%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#होटल #होटल #भियना europetravel म्यूनिख trainjourney रेल सुझावहरू रेल यात्रा travelaustria travelfrance travelgermany ट्राभेलपारिस travelrome
लुकेका रत्न युरोप अनि कसरी ट्रेन द्वारा त्यहाँ प्राप्त गर्न
कसरी ट्रेन द्वारा विद्यार्थी यात्रा युरोप मा